Fahalalahàna miteny · Mey, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Mey, 2012
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Mey, 2012
Kondwani Munthali: Bilaogeran'ny Taona ao Malawi
Afrika Mainty16 Mey 2012
Sambany teo amin'ny tantaran'ny media ao Malawi no ekena ho fanao manana ny anjara toerany eo amin'ny fanaovan-gazety ny famahanana bolongana. Izany no nanaraka ny fanomezandoka ilay bilaogera sady mpanao gazety Kondwani Munthali niarahana tamin'ny Lokan'ny famahanam-bolongan‘ny taona avy amin'ny Media Institute of Southern Africa (MISA). Ao anatin'ny andro fankalazana ny Andron'ny...
Iran: Tsy Voakapoka in-25 Noho Ny Nanoritsoritany Mpanao Politika Ilay Mpanao Sariitatra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Mey 2012
Voasazy [fa] hahazo kapoka 25 noho ny nanoritsoritany ilay mpikambana parlemantera teo aloha ilay mpanao sariitatra Iraniana, Mahmoud Shokraye. Nisy ny fanentanana an-tserasera ho fanohanana azy
Rosia: Ustream.tv Voatafika Noho Ilay Bilaogera Rosiana
Eoropa Afovoany & Atsinanana12 Mey 2012
Ny marainan'ny 9 Mey 2012, nisy olo-tsy fantatra nanafika tamin'ny alalan'ny DDoS (Distributed Denial of Service) ny vohikala mpikarakara mivantana Ustream.tv. Araka ny nolazain'i Victoria Levy avy ao amin'ny Ustream.tv, avy amin'ny IPs an'arivony, miorina any Rosia, Kazakhstan ary Iran ny fanafihana. Nitodika tany amin'ny mpisera iray manokana [ny fanafihana]...
Maoritania: Tafihan'ny Mpitandro Ny Filaminana Ny Mpanohitra
Afrika Mainty10 Mey 2012
Noravain'ny mpitandro ny filaminana tamin-kerisetra vao marainan'ny 3 mey ny sit-in nataon'ny mpanohitra tao Nouakchott. Io no andia-pihetseha-panoherana farany indrindra nitranga tany Maoritania.
Tonizia: Lehibenà Foibem-pahitalavitra Enjehana Fa Nandefa Ny “Persepolis”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana07 Mey 2012
Ny 3 May no voatondro hamoahan'ny fitsarana Toniziana ny didy tamin'ny fitsarana an'i Nabil Karoui, tompon'ny fantsom-pahitalavitra tsy miankina Nessma TV, izay enjehina ho namoaka ny sarimiaina Persepolis novokarin'i Marjane Satrapi.
Kiobà: Aiza Ny Fahalalahan'ny Fanaovan-Gazety?
Karaiba07 Mey 2012
Andron'ny Fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ny andro androany (3 Mey 2012) – saingy eo amin'ny tontolon'ny bilaogy ao Karaiba, mpamahana bolongana vitsy an'isa no hany mba naneho hevitra mikasika ny lohahevitra. Nandefa vaovao mikasika izany andro izany ny Notes from the Cuban Exile Quarter, izay nanazava hoe:’ Nanambara ny Firenena Mikambana tamin'ny 20 Desambra 1993 fa ny...